Lisitry ny lisitry ny lozisialy momba ny tranokala: ny 67 Ultimate Must-Haves amin'ny tranokalanao | Martech Zone
Zoma, Oktobra 2, 2020 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Douglas Karr
Wow. Tiako izany raha misy mamolavola lisitra fizahana amin'ny infographic izay sady tsotra no informative. UK Web Host Review namolavola ity sary ity hamoronana lisitry ny fiasa heverin'izy ireo fa tokony hampidirina amin'ny fisian'ireo orinasa an-tserasera.
Mba hahombiazan'ny orinasanao amin'ny Internet dia mila mahazo antoka ianao fa feno endrika ny tranokalanao! Betsaka ny antsipiriany madinidinika izay afaka mahavita ny tsy fitoviana rehetra - na amin'ny fanomezana fahatokisana ny mpanjifa izany na amin'ny fanomezana asa fanampiny manampy azy ireo hiova fo ary hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ny tranonkalanao Mahatonga ny orinasanao hijoro tsy mitovy amin'ny an'ny iray hafa manome anao faritry ny fifaninanana.
Ity lisitra ity dia natao ho an'ny orinasam-pandraharahana rehetra ary tokony hijery koa ireo tranonkala e-varotra. Nanampy zavatra vitsivitsy hafa koa aho ho fanampin'ny lisitry ny lisitry ny lisitr'izy ireo izay tokony ampidirinao koa!
Amin'ny ankapobeny, tena ilaina tokoa ny fanarahan'ny tranonkalanao ny tanjona ampidirinao vola - ny hitondra fiara. Midika izany fa ny mpitsidika rehetra dia tokony hipetraka amin'ny fikasana, hahita ny fampahalalana ilainy, hitarika amin'ny fiovam-po, ary hanome anao ny fampandrenesana ilaina sy ny tatitra ilainao hanohizana ny fanatsarana ny tranokala.
Orinasa betsaka loatra no mifantoka loatra amin'ny famolavolana. Ny famolavolana tsara tarehy dia manome ny fiantraikany eo noho eo izay tadiavinao ho an'ny mpitsidika, fa raha tsy miasa sy mitondra fiara-mivarotra ho an'ny orinasanao ny tranokala dia tsy mendrika izany. Mifanohitra amin'izany, matetika ireo masoivoho dia tsy manolotra ireo endrika rehetra tokony hahombiazan'ny tranokalanao. Ny fiovam-po, ny fikarohana ary ny fanatsarana ara-tsosialy dia tsy tokony ho add-on, fa tokony ho baseline ho an'ny tetikasa tranonkala rehetra izany.
Ao amin'ny lohan'ny pejinao:
Anarana nomena anarana - mora ny mamaky sy mahatadidy izany. Ny extension domain .com dia premium hatrany satria izany no hamaha ny browser raha toa ka manoratra ao amin'io domaine io ianao raha tsy misy ny extension. Mahazo ekena kokoa ny fanitarana faritra vaovao (oh. Zona eto!) Ka aza manahy be loatra… indraindray ny faritra fohy kokoa miaraka amin'ny fanitarana hafa dia mety ho vahaolana tsy hay hadino kokoa noho ny domain .com lava izay tsy misy dikany na mitaky tsipika sy teny hafa. Ho gaga ianao amin'ny fifanarahana lehibe azonao atao amin'ny lavanty domain. Aza atsahatra amin'ny fisoratana anarana vaovao ny fikarohanao.
Logo - solontena matihanina amin'ny orinasanao tsy manam-paharoa. Logo design dia kanto… mitaky fifanoherana, fanekena amin'ny habe, famoronana, loko izay kendrenao ny mpihaino anao, ary angamba mandefa hafatra hita maso misy fiatraikany amin'ny mpihaino anao. Aza hadino ny mampifandray ny sary famantarana anao hiverina amin'ny pejin-tranonao satria efa zatra izany ny ankamaroan'ny mpitsidika.
TagLine - famaritana fohy momba izay ataon'ny orinasanao. Tsy tokony ho endri-javatra io raha tsy vokatra na serivisy tokana ianao. Mifantoha amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny vokatrao na serivisinao fa tsy ilay endri-javatra. Manapaka menaka tonga lafatra ho an'i Dawn. Fa lisitry ny fampiharana sy ny fampidirana fa tsy Fantaro ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia tsara kokoa ho an'ny Highbridge.
Nomeraon-telefaona - a azo tsindriana ary azo zahana nomeraon-telefaona (ary alao antoka fa mamaly ianao). Ny fanaraha-maso nomeraon-telefaona dia hanampy anao hanolotra fampielezankevitra tsaratsara kokoa sy ny fomba ahatongavan'ireo vinavina aminao. Matetika ny mpampiasa dia finday matetika, ny fiantohana ny laharan-telefaona rehetra misy rohy azo tsindriana dia ilaina… izao dia te hanandrana sy handika ary hametaka nomeraon-telefaona iray amin'ny alàlan'ny efijery finday.
Antso-to-Action - lazao amin'ny mpitsidika ny zavatra tianao hataon'izy ireo manaraka ary hataon'izy ireo izany. Ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao dia tokony hanana CTA. Tena manoro hevitra aho manana Miantsoa hanao asa bokotra eo an-tampon'ny havanana amin'ny fitetezana anao koa. Ataovy moramora izany, lazao amin'ny mpitsidika izay hatao manaraka, ary ampio hitondra ny dian'ny mpanjifa.
Top Navigation - Safidy malina hitadiavana ireo pejy ambony amin'ny tranokalanao. Mety ho mahafinaritra ny menus mega, fa raha tsy hoe noforonina tsara izy ireo, safidy be loatra dia mety ho mavesatra amin'ny mpihaino anao. Nahita fifampiraharahana sy fitsidihana pejy nisongadina teo amin'ireo tranonkala izahay izay nampihena ny singa fitetezana ho ampahany kely amin'ny izy ireo.
Fikarohana mofo tsy misy mofo - Ampio ireo mpitsidika anao hitety an-tanindrazana. Tena tsara ny manome olona fitaovana hivoahana ambony. Ny sombin-mofo dia fitaovana fanatsarana fikarohana lehibe koa, manome ny motera fikarohana miaraka amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny ambaratongan'ny tranokalanao. Indrindra raha tranokala ecommerce misy sokajy sy vokatra SKU an-taonina ianao.
Horonan-tsary, sary na slider - asehoy maso ireo teboka fivarotana sy mpanavaka miavaka. Azonao atao aza ny mampiditra boaty kely. Rehefa manana sary na sary ianao izay misy antsipiriany tianao tadiavin'ny mpitsidika, manao sary azo kitihana izay ivoahan'ny sary, galeriana na slider amin'ny fananana farany ambony indrindra dia traikefan'ny mpampiasa.
Fanamarihana sy fijoroana ho vavolombelona - Ilaina ny porofo ara-tsosialy. Ny ankamaroan'ny mpitsidika ho avy dia te-hahatakatra zavatra roa tena lehibe… Azonao atao ve ny milaza ny zavatra lazainao? Inona no porofo fa mahay ianao? Tsara ny fijoroana vavolombelona an-tsoratra, ny video dia tsara kokoa. Raha mandeha an-tsoratra ianao dia aza hadino ny mampiditra sarin'ilay olona miaraka amin'ny anarany, lohateny ary ny toerana misy azy (raha azo ampiharina).
Fampahalalana lehibe momba ny orinasa - Ny toerana misy anao ara-batana sy ny adiresy mailakao dia mety mba hampidirina ao amin'ny tranokalanao. Raha manakiana ny orinasanao ny toerana ara-batanao dia azonao atao ny mampiditra azy ao amin'ny mari-pamantarana lozisialy, na manome sarintany manerana ny tranokala mba hahitan'ny olona anao mora foana. Zava-dehibe ihany koa ora fampahalalana ary ny fomba tsara indrindra hifandraisana aminao.
Ireto ambany ireto:
Mazava ho azy, amin'ny efijery maoderina… ny vala dia tsy mitovy amin'ny fitaovana rehetra. Na izany aza, amin'ny ankabeazany, ny faritra eo amin'ny efijery izay tsy hita eo no ho eo rehefa misy manokatra ny pejinao ao anaty tranokala. Aza matahotra pejy lava… raha ny tena izy, efa nanandrana sy nahita pejy lava voalamina tsara izahay nanao fampisehoana tsara lavitra noho ny fanaovana tsindry mpitsidika hahatratra ny vaovao ilain'izy ireo.
Ny votoatin'ny kalitao - ny tolo-kevitra fivarotana tsy manam-paharoa nofaritana ho an'ny mpitsidika sy karoka.
Main Features - an'ny vokatrao sy serivisinao.
Rohy anatiny - mankany amin'ny pejy anatiny an'ny tranonkalanao.
Bookmarks - Rohy ao anaty atin'ny pejy iray hanampiana ny mpampiasa hitsambikina na hidina pejy iray hahitana ny vaovao tadiavin'izy ireo.
Fikarohana - fitetezana faharoa amin'ny pejy mahazatra. Indraindray ny latabatra misy index miaraka amin'ireo tsoratadidy hanampy ny mpitsidika mitsambikina avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa.
Social Media - ampio ny olona hahafantatra anao amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy.
Fampisehoana an-tserasera - serasera eo noho eo raha manao fikarohana ny mpitsidika. Chatbots dia lasa fitaovana mahatalanjona hahafeno fepetra sy handefasana ny fangatahana amin'ny alàlan'ny fifampiresahana amin'ny fomba marina sy mety. Misy ihany koa ireo mpandray fandraisam-bahiny amin'ny andro fahatelo izay azonao ampiasaina raha tsy manana ny mpiasa hanara-maso ny resakao mandritra sy ivelan'ny ora fiasana ianao.
Ora - miaraka amin'ny toerana misy anao, ity dia ho azo antoka fa hahalala ny mpitsidika rehefa afaka mitsidika izy ireo. Ny ora raharaham-barotra dia azo ampidirina ao amin'ny metadata an'ny tranonkalanao ihany koa amin'ny motera fikarohana, lahatahiry ary serivisy hafa mandady amin'ny tranokalanao.
Antsipiriany ifandraisana - adiresy ara-batana sy adiresy (es), nomeraon-telefaona, ary / na adiresy mailaka. Mitandrema ihany anefa amin'ny famoahana adiresy mailaka. Maka azy ireo tsy an-kijanona ireo mpikomy ary mety manomboka mahazo spam be dia be ianao.
Momba anay Ny atiny - inona ny tantaranao?
Votoatin'ny pejy anatiny -ny vokatra sy serivisy fanolorana asa amin'ny antsipiriany.
Taratasy fifandraisana - let mpitsidika mahalala hoe rahoviana no hiandrasana valiny.
Captcha / Anti-Spam Feature - miala tsiny ianao raha tsy manao izany! Ny bot dia mandady tranokala foana ary mandefa endrika rehefa tsy ampiasaina izy ireo.
Pejy FAQ - fanontaniana napetraka matetika momba ny vokatrao sy ny serivisinao.
Pejy bilaogy - vaovaon'ny orinasa, vaovaon'ny indostria, torohevitra ary tantaran'ny mpanjifa azonao zaraina amin'ny mpihaino anao.
Fanehoan-kevitra - mampitombo ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa.
Karoka fikarohana - manamora ny fahitan'ny mpitsidika ny vaovao tadiaviny.
sidebar - asehoy ny hafatrao farany na malaza indrindra amin'ny bilaogy, antso-to-hetsika na hafatra mifandraika amin'izany.
Hizara Media Sosialy - mamela ny mpampiasa hizara ny lahatsoratrao amin'ny fomba mora.
Hevitra hafa momba ny atiny sy ny endriny hodinihina:
Famakiana mora vakina sy madio mora foana - tadidio fa ny endritsoratra serif dia mamela ny mpamaky hamaky votoaty mora kokoa. Tsy fahita firy ny mampiasa endritsoratra Sans-serif amin'ny lohateny sy endritsoratra serif ho an'ny atin'ny vatana.
Rohy izay mora azo - ny loko, ny tsipika ambany, na ny bokotra dia hitarika ny mpampiasa hikitika ary tsy ho sosotra.
manaiky finday - ny famolavolana tranonkala maoderina izay toa tsara amin'ny fitaovana finday dia tsy maintsy atao!
Hamburger menio amin'ny tranokala finday
Mampiasà loko mifanohitra
Mampiasà mpanamarina ody - tianay Grammarly!
Fanavaozana ny lohateny sy ny meta - manatsara ny lohateninao sy ny famaritana meta mba hahafahan'ny mpampiasa motera fikarohana manindry kokoa.
Famoronana sitemap mandeha ho azy - ary ny fandefasana amin'ny fitaovana webmaster mahazatra.
Mora ny manavao ny firafitry ny URL - Ny URL fohy sy fohy izay tsy mampiasa querystrings sy isa dia mora zaraina ary manintona kokoa raha tsindriana.
Server sy fampiantranoana:
Fampiantranoana haingana sy azo antoka - tianay Flywheel!
Fampisehoana nomaniny ho solon'izay tranokala mandeha ho azy - ny tranokalanao dia mila haverina amin'ny alina ary mora averina amin'ny laoniny. Ny ankamaroan'ny sehatra fampiantranoana tsara dia manolotra an'io.
SSL / HTTPS - alao antoka fa manana taratasy fanamarinana fiarovana ny tranokalanao, indrindra raha manangona vaovao amin'ny mpitsidika ianao. Ilaina izany amin'izao fotoana izao satria ny mpitsidika maoderina dia hisoroka na inona na inona afa-tsy atiny azo antoka.
Fepetra takiana teknika Backend:
Mampiasà CMS - tsy azo atao ny mifaninana amin'ireo rafi-pitantanana atiny ankehitriny mba hampidirana ireo fitaovana, fampidirana ary fahombiazana rehetra amin'ny fanandramana manoratra ny lozisialy tranokalanao manokana. Mitadiava a CMS miaraka amin'ny fahaiza-manao SEO lehibe ary ampiharo avy hatrany.
Kaody nohavaozina ho an'ny famoahana pejy haingana - Ny rafitra CMS maoderina dia mampiditra tahiry fitehirizana tahiry hitahirizana ny atiny sy pejy web hanontanianao sy hampisehoana azy. Ny kaody saro-pantarina loatra dia mety hametraka enta-mavesatra be loatra amin'ny mpizara tranonkala anao (indrindra rehefa mamely ny tranokalanao ireo mpitsidika miaraka), kaody kaody tsara izany!
Fampidirana Google Search Console
Fampidirana Google Analytics - tsara kokoa aza angamba ny fampidirina Google Tag Manager miaraka amin'ny Google Analytics voalamina.
Microformats - Famaritana Schema.org hovakian'i Google (indrindra raha orinasa eo an-toerana ianao), ny angona Twittercard ho an'ny twitter, ary ny tagging OpenGraph ho an'ny Facebook dia afaka manatsara ny fahitana anao rehefa zaraina na hita ao amin'ny fikarohana sy media sosialy ny tranokalanao.
Famatrarana haino aman-jery - ampiasao an serivisy famatrarana sary hanafainganana ny famoahana sary fa tsy hanimba ny kalitaon'ireo sary.
kamo Loading - Ny sary, audio, ary horonan-tsary dia tsy mila entina eo noho eo eo amin'ny pejy web mandra-pahitany azy ireo na jerena na henoina. Mampiasà teknolojia fampidirana kamo (namboarina WordPress) mba asehoy aloha ny pejinao… dia asehoy ny media rehefa ilaina.
Site Caching - rehefa voateraka ny tranokalanao dia mety ho haingana izany. Fa ahoana kosa raha manana mpitsidika an'aliny ianao ao anatin'ny iray andro… hianjera ve sa haharitra?
Zavatra tokony hialana:
Mampiasà serivisy fampiantranoana horonantsary, aza mampiditra horonan-tsary amin'ny mpizara anao
Aza atao mozika any aoriana
Aza mampiasa Flash
Sorohy ny tranokala tsindrio (raha tsy misy famerana taona)
Aza mangalatra atiny, sary na fananana hafa
Aza mizara fampahalalana tsiambaratelo
Item fanampiny tsy hita
Fanoratana amin'ny Newsletter - Betsaka ny mpitsidika ny tranokalanao no tsy vonona hividy fa hisoratra anarana hividy any aoriana na hifandray. Ny fisamborana ny mailaka dia singa iray manankery ho an'ny orinasa tsirairay!
CDN - Tambajotra fanaterana atiny hanafaingana be ny tranokalanao.
Robots.txt - Ampahafantaro ny motera fikarohana izay azon'izy ireo atao sy tsy azony atao index, ary aiza no ahitana ny sitemap-nao. Vakio ny: Inona no atao hoe Search Engine Optimization?
fiantsonana Pages - Pejy manjavozavo dia tsy maintsy manana. Ny pejy itodiana ho an'ny mpitsidika voatosika tsirairay izay nanindry ny antso-to-hetsika dia manadanja ny fahombiazan'ny fiovam-ponao. Ary ny pejy fiantsonana izay mifamatotra amin'ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny sehatry ny automatisation marketing dia tsara kokoa aza. Vakio ny: Fahadisoana pejy 9 hialana
Podcasts - Podcasting dia manohy mitondra vokatra amin'ny orinasa. Ny orinasa dia afaka kendrena hitarika ho amin'ny dinidinika, hisambotra fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpanjifa, hampianatra ny mpanjifany ary hanangana fahefana amin'ny seha-piharian'izy ireo. Vakio ny: Maninona no Podcasting ny orinasa
Videos - Na ny orinasa kely aza dia afaka mividy horonantsary ifotony… ny findainao dia ny findainao ary tsara ny mandeha! Manomboka amin'ny horonantsary manazava ka hatrany amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia ho gaga ianao amin'ny isan'ny mpitsidika tsy hamaky, fa kosa hijery horonan-tsary manerana ny tranokalanao. Aza matahotra mametraka azy ireo mandritra ny atiny rehetra. Vakio ny: Maninona ny Video Product no laharam-pahamehana ary karazana video 5 tokony hamokaranao
Map - Misoratra anarana amin'ny Google Business? Tokony hikaroka karatra momba ny orinasanao ianao. Ary ampirisihiko ianao mba hanisy sarintany eo amin'ny tranokalanao ihany koa.
Logo Bar - Raha orinasa B2B ianao, ny fananana bara famantarana dia manakiana mba hahitan'ny mpanantena an'izay olona iarahanao miasa. Nanangana an Widget rotator sary noho io antony io indrindra.
Loharano Premium - Raha tsy mamokatra atiny premium toy ny infografika, taratasy fotsy ary fandinihana tranga ianao, dia tsy mahita fomba maro hisarihana mpitsidika hifandray aminao amin'ny alàlan'ny pejin-tranonao! Vakio ny: Ny tetika marketing ambony ho an'ny taranaka mitarika
Fitsipika finday - Lahatsoratra Lahatsoratra Instant Facebook, Apple News, ary Google Accelerated Mobile Pages dia fenitra vaovao mifangaro tafiditra ao izay tokony havoakanao. Vakio ny: Ao amin'ny Apple News izahay izao
Tags: momba anaymomba anay pejyampanti spammozika ambadikabilaogyfitetezana mofo malemymofo kobaBreadcrumbbreadcrumbsora fiasanafampahalalana momba ny asamiantso amin'ny asabokotra miantso ny hetsikaCAPTCHAlisitraspam hevitrafanehoan-kevitraContact Formctafifanakalozan-kevitrasehatra anaranaFAQFAQsFlashGoogle Analyticsgoogle mapGoogle Mapsgoogle ny orinasakomenio hamburgerImage Slidersaryrohy anatinyfikarohana anatinypejy pejyLogorotator logoMarketing InfographicsPodcast Marketingmenio findayny programmer web-koFikarohanaNewsletter SIGNUPmisoratra ara-baovaonewslettterchat amin'ny Internetnomeraon-telefaonapodcastingatiny premierekalitaomanaiky Designhevitrarobotendri-javatra tranonkalafampahalalana momba ny tranokalaSliderfandraharahana madinikabokotra fanarahana ara-tsosialybokotra fizarana ara-tsosialyamin'ny spamtaglinefijoroana vavolombelonafitetezana ambonyvideo hostinghoronan-tsarylisitra fanamarinana tranonkalafampahalalana momba ny orinasan-tranonkalaendri-tranonkalafotsy fotsy
Bizzabo: ampioreno amin'ny sehatra tokana ny hetsika manokana ataonao manokana sy virtoaly
GetProspect: Mitadiava adiresy mailaka B2B ary tantano ny lisitry ny Prospect
25 Nov 2016 tamin'ny 1:36 PM
Eo ambanin'ny atiny hafa sy ny endrika famolavolana hodinihina, azoko atao ve ny manampy andalana fohy ary koa bala sy isa? Eny, ireo dia ampahany amin'ny mahadio sy vakiana amin'ny atiny amin'ny Internet (ny hevitrao # 31) saingy mino aho fa mendrika hotononina manokana izy ireo ao anatin'ity fizarana ity amin'ny tatitra nataonao.
Oct 25, 2017 amin'ny 11: 36 AM
Namorona lisitra fizahana tranokala izay somary teknika kokoa aho ary afaka manampy ny mpamorona rehefa mandefa tranokala vaovao: http://nali.org/website-checklist/
Oct 27, 2017 amin'ny 9: 32 AM
Misaotra nizara, Nick!
18 Nov 2020 tamin'ny 12:46 PM
Mahafinaritra, tena ilaina tokoa! Misaotra anao